Site na: KongoLisolona: Mee 9, 2020 00: 55 1 Comment
Kedu ihe kpatara K. West ji gbanwee ogo 180 ka ọtụtụ afọ gachara (ma na-egwu Amber Rose) ?? Ọ bụ agba nke akpụkpọ ọcha na-adọta ya na K. Kardashian ?? K. West, ọ dara maka ndị Kardashians? Dị ka kpakpando, e buru K. West gaa na 7th nke eluigwe site na ịma mma agwakọtara na aghụghọ nke Kim site na nke a na-akpọ "Kashians Incredible" ??
Mgbe ya na Kim Kardashian dị, ọ dị ka a ga - asị na àmụmà merụrụ Kanye West nke mere ka o chefuo nwanyị ọ lụrụ (na Amber Rose). Kemgbe ahụ, obi ya ka na-eti ihe na Kim K. nke mere Kim ji zuo ohi K. West site na onye ọ ga-alụ (na Amber Rose).
Oge nfe dị mfe na ntọala nke ntụgharị. Ma nke a mmekọrịta ịhụnanya tụgharịrị na ọghọm nke nwunye nwanyị mbụ nke Kanye N'ebe ọdịda anyanwụ!
Egwuregwu ụmụaka: ezigbo ngwongwo nke mmepe onwe onye: oke plastik nke ihe ụmụ-agụụ na-agụ ụmụaka na-enye ha ohere ịche n'echiche egwuregwu dị mfe nke na-enye ha ohere ịba ụba isi iyi ụtọ ha wee si otú a kwadebe iji chee nsogbu ahụ ihu. nnukwu egwuregwu nke ndụ mgbe ha tolitere
Nwa ehi ojii a nwụrụ. Onweghi ndi isi ojii choro ya